အင်တာနက်မှ အတုအယောင်fakeအီးမေးလ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အင်တာနက်မှ အတုအယောင်fakeအီးမေးလ်များ
Posted by etone on Oct 25, 2010 in News |2comments
We are looking for experience applicants or Manpower to provide applicant to fill and work in Hotel Branch in Canada.Jobs vacancies available
Sales Assistant and Manager
Administrative and Assistant Administrative
Electrical,Mechanical and Computer Engineering
Any interested applicant should contact the Manager for more details about the Job available on below email address
My Private Tel: (+233 261 581 596)
I am Mr. John Abbey, the branch manager of the Standard Chartered Bank Of Ghana, Takoradi Branch . I got your information during my search through the Internet. I am 47 years of age and married with4lovely kids. It may interest you to hear that I amaman of PEACE and don’t want any problem, but I don’t know how you will feel about this, but I am telling you that this is real and you are not going to regret after doing this transaction with me. I only hope we can assist each other. But If you don’t want this business offer kindly forget it as I will not contact you again.
I have packagedafinancial transaction that will benefit both of us, as the Regional manager of the Standard Chartered Bank Of Ghana, Takoradi Branch; It is my duty to send inafinancial report to my head office in the capital city Accra-Ghana at the end of each year. On the course of the year 2008 end of year report, I discovered that my branch in which I am the Manager made Seven Million Six Hundred and Fifty Thousand Dollar [$7,650.000.00] which my head office are not aware of and they will never be aware of, Nor must they know that I am involved in this transaction.
…. အထက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်များကဲ့သို့မေးလ်များ မိမိတို့ဆီရောက်လာခဲ့ရင် ပြန်မဖြေပါနဲ့ ။ အတုအယောင်များသာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်တတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေဖြည့်ခိုင်းတတ်ပါတယ် ။etone ရဲ့ official email ထဲကို ၀င်နေတဲ့စာတွေပါ ။ တစ်နေ့တနေ့အနည်းဆုံး 4စောင်5စောင်မကပါဘူး ။ အွန်လိုင်းမှာလိမ်ညာမှူတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။ etone တို့company ကိုလာတဲ့ technician တယောက်ဆိုရင် သူ့ထဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒီလိုစာတွေကို လိုက်ဖြေပါတယ် ။ နောက်လပိုင်း အကြာမှာ သိတာကတော့ သူ့နာမည်နဲ့ အကြွေးတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့…သူ့ဒီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူရဲ့personal information တွေသုံးပြီး တယောက်ယောက်က credit card တွေသုံးခဲ့တာပါတဲ့….. သူပြန်ပြောလို့သိရတာပါ ။ အားလုံးပဲ အလိမ်ညာခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေနော် ။
တကယ်ကတော့ ငွေ သိပ်လိုချင်တဲ့ ပြဿနာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်နေတာ .. ဒီဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ .. အချောင်ရမလား .. မြက်မြက်ကလေး ရမလားလို့ လိုက်ကြရင်းနဲ့ ကိုယ် ဒုက္ခရောက်တာပါ ..
အဓိက က ငွေနောက် မလိုက်ဖို့ .. အချောင်ရတာ မလိုချင်ဖို့ ..